Archive du 20161206
Antananarivo Renivohitra Kapitalin�ny ranomasina indianina
Hanomboka anio talata 6 desambra eto Antananarivo renivohitr�i Madagasikara ny fivoriambe tsy ara-potoanan�ireo tan�n-dehibe sy ireo vondrom-bahoaka aty amin�ny faritry ny Ranomasimbe Indiana na AVCOI (Association des Villes et Collectivit�s de l�Oc�an Indien), ka tsy hifarana raha tsy ny alakamisy 8 desambra ho avy izao.
Berija sy Jean Pierre Mpisoloky, hoy ireo mpianatra
Manoloana ny hetsiketsika ara-panatanjahantena maro samihafa izay nokarakarain�ilay fikambanana � SOlidarit� des LEaders de MAdagascar� na ny SOLEMA
Tabera Randriamanantsoa �Ampahantrain�ny vahiny tanteraka isika�
Tsy hitondra vokatsoa ho antsika Malagasy ny fitrosana fa vao mainka hampahantra.
Parlemantera Vehivavy Nanamafy traikefa momba ny miralenta
Nanatanteraka Atrikasa niaraka tamin�ireo Vehivavy Parlementera teny amin�ny H�tel du Louvre Antaninarenina ny ONCD na ny
Nanatanteraka Atrikasa niaraka tamin�ireo Vehivavy Parlementera teny amin�ny H�tel du Louvre Antaninarenina ny ONCD na ny � Office National de Concertation sur la D�centralisation � omaly alatsinainy 5 desambra 2016.
DISTIM 6e Ambohimanarina Mitohy ny fanamafisana orina ny antoko TIM
Faly Ramakavelo � Tsy vahaolana ny fitrosana any ivelany �
Miteraka adihevitra lehibe ny fahazoan�ny fanjakana Malagasy fampindramam-bola mitentina 6,4 miliara dolara sy ny fampiasam-bola mahatratra hatrany amin�ny 3,8 miliara dolara hataon�ireo orinasa goavana efa misy eto amintsika.
Fampihavanam-pirenena Be loatra ny kajikajy
Hatramin�ny taona 2009, tsy mbola tafapetraka ny fampihavanana tena izy.
Rajaonarimampianina Hanadio ireo manodidina azy ?
Tsy dia tompon�ny fahefana sy tsy masi-mandidy eto amin�ny firenena intsony ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Antenimierandoholona Hifanatrika amin�ny Governemanta anio
Lany omaly alatsinainy 5 desambra 2016, teny amin�ny Lapan�Anosikely, ny volavolam-pandaharam-potoana manaraka ho an�ireo eny anivon�ny Antenimierandoholona,
Taratasin�i Jean Aza mifanadredraka e !
Aleo aloha mba mifaly ry Jean fa tsy isan�andro anie no ho tompondaka toy izao e ! Dia mitondra inona ho anareo izao ny fanatsatsoana hoe maivana ny mpifanandrina tamin�ny alahady ?
Oniversite tsy miankina Maro no tsy manara-penitra
Tsy mbola voafehy ny fampanaraham-penitra ny tontolon�ny fampianarana ambony tsy miankina eto amintsika.
Ratsimbazafy Jean Paul Mila harindra ny fitrandrahana ny harena ankibon�ny tany
Taorian�ny fahatotosan�ny fivoriana an-tampon�ny Frankofonia andiany faha-16 farany teo teto amintsika dia efa mitodika aty Madagasikara ny mason�ireo firenena vahiny maro ankehitriny eo amin�ny ezaka fanaingana indray ny tontolon�ny toekarena Malagasy amin�ny fiaraha-miasa matotra amin�izy ireo.
FANDRAISANA MPAMPIANATRA FRAM Hametraka olona roa isaky ny Cisco sy ny Dren ny Aneffa
Mbola betsaka ny tsy mandeha amin�ny laoniny amin�ny fandraisan�ny fanjakana ireo mpampianatra FRAM miisa 10.000 isan-taona eto amintsika raisina ho mpiasam-panjakana
Mpilatsaka an-tsitrapo Olona 609.000 misahana olona 22 tapitrisa
Tsy mahasarika olona loatra ny asana mpilatsaka an-tsitrapo eto amintsika.
Mbola betsaka ny tsy mandeha amin�ny laoniny amin�ny fandraisan�ny fanjakana ireo mpampianatra FRAM miisa 10.000 isan-taona eto amintsika raisina ho mpiasam-panjakana.
THB TOUR 2016 Tsy diso anjara ny faritra atsimon�ny Nosy
Tsy diso anjara tamin�ilay hetsika THB tour nokarakarain�ny vondrona Star ny tany amin�ny Faritra Atsimon�ny Nosy.
Aiza izay mba valim-babena e ?
Mbola manakoako ny fandresena miezinezina azon�ny ekipam-pirenena Malagasy teo amin�ny taranja tsipy kanetibe, ka nisalorana ny anaram-boninahitra maha tompondaka eran-tany.